Inkwenkwezi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Phakama ngaphezu komhla wakho wemini kwaye uqhagamshele kuThixo.
Intsingiselo yekhadi «iNkwenkwezi» kwiTarot
Ikhadi le-Star Tarot lizama ukudibanisa umphefumlo kunye nobuthixo Ukubaluleka kobuntu, usapho, uluntu kunye nodumo. Ekugqibeleni inento yokwenza nenkululeko yokuba nguwe. Umphefumlo uphendula kwiimpembelelo zasezulwini-imikhosi enokunika ubuntu ukuqonda okungakumbi kwenjongo.
Ikhadi leNkwenkwezi isinceda sikhumbule imvelaphi yethu ephakamileyo kunye nomtsalane wethu kwimanyano ephezulu.
Le leta inokubizwa Igunya laseZulwini -iyo leyo isibhekisa kwisizathu sethu sokuba, ukuthunywa kwethu kobu bomi. I-Star isikhumbuza ukuba, ngandlela thile, singabameli bokuthanda kukaThixo kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukuba siyayiyeka imbono yokuba kufanele ukuba silawula, sinokuqaphela ngokulula ngakumbi kwaye sikuxabise ukungahambelani kwezinto okusityikityayo.
Ngale ndlela, siba nolwazi olungakumbi ngoncedo olungabonakaliyo, kwaye siyiqonda ngcono indawo yethu ngaphakathi kwendalo enkulu, kunye nexabiso layo.
Ixesha lakho ulichitha bhetele ekubonakaliseni nasekukhangekeni ngokomoya.
Ikhadi le-Star licebisa oko uzinikezela kwakhona kumaxabiso akho aphezulu, Yandisa ukulima kwakho ngokomoya kunye nokucamngca, kunye nokunikezela kokulungileyo. Qhagamshela kwisiqu sakho esiphakamileyo -Umntu ovela kummandla omkhulu ohamba ikhosi yendaleko eyaqala kudala kwaye iqhuba ngokungenammiselo kwikamva. Eli liqela ofuna ukunxibelelana nokunxibelelana nalo.
Ngoku lixesha lokucinga nzulu. Mamela ilizwi elingaphakathi. Nantoni na ephazamisa obu budlelwane isenokungasebenzi ngexesha lakho.